> Resource > Ladnaansho > Siduu u MicroNet Data Recovery
Sidee baan ka MicroNet External Hard Drive soo kaban karto, Data?
Waa hagaag, fadlan i caawi. Waxaan u baahan inuu ka soo kabsado xogta ka USB flash MicroNet drive hadda. Waxaan leeyahay 16GB MicroNet flash USB drive ah, taas oo ku kaydsan badan oo files shaqo qiimo badan aan. Saaka aan kid u formatted oo aan raad raac. Waxaas oo dhan files dadkaygii waxaa loo. Run ahaantii waxaan jeclaan qof iga caawin kara dib si aad u hesho files aan. Mahad badan.
Hambalyo. Tutorial Tani waa dhan waxa aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado xogta ka MicroNet flash USB drive ama drive dibadda adag. Dhab ahaantii, faylasha lumay ayaa weli aad USB drive MicroNet. Waxay yihiin oo kaliya geli karin, iyo marka keliya xogta cusub ku USB drive MicroNet overwrites iyaga doona weligiin ay la waayay. Waxaad ka heli kartaa barnaamijka xogta MicroNet ah ee Internet-ka si ay kuu caawiyaan.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij sida u saamaxaya in aad ka bogsato xogta ka MicroNet drive dibadda adag ama soo kabsado xogta ka MicroNet flash USB drive, iyadoo aan loo eegayn xogta aad lumay, maxaa yeelay tirtirka, musuq-maasuq, formatting qalab ama xitaa baadi nidaam. Waxaad si fudud u soo kaban karto oo dhan dukhsiga ka qalab lagu kaydiyo MicroNet, sida videos, files audio, sawirada, document files, iwm
Fadlan kala soo bixi version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah inuu ka soo kabsado files lumay ka qalab lagu kaydiyo MicroNet hadda!
3 Talaabada inay Qabtaan MicroNet Data Recovery
Haatan waxaan u tegayaa inaan kuu sheego sida ay u soo kabsadaan xogta ka qalab lagu kaydiyo MicroNet la Windows version of Wondershare Data Recovery. Users Mac karto soo kabashada in talaabooyin la mid ah la version Mac aad.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada xogta MicroNet
Marka bilaabay Wondershare Data Recovery on your computer, aad arki doonaa 3 hababka soo kabashada ee suuqa kala bilowgii ay.
Si aad u soo kabashada laga badiyay, tirtiray, formatted ama kharribeen files ka qalab lagu kaydiyo MicroNet, ha la qaado "lumay Recovery File" mode sida isku day ah.
Tallaabada 2 baarista qalab lagu kaydiyo MicroNet
Hadda kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan warqad drive ee qalabka lagu kaydiyo MicroNet ka furmo oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka xogta laga badiyay.
Door "Enable Deep Scan" doorasho haddii faylasha aad lumeen sababtoo ah formatting.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad qalab lagu kaydiyo MicroNet in si wanaagsan loo-xiran kartaa adiga oo computer la sameeyo.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka USB flash MicroNet drive / drive dibadda adag
Dhammaan files helay ku saabsan qalabka lagu kaydiyo MicroNet la soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka ee. Waxaad u baahan tahay oo kaliya si ay u xusaan faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho" button uu furmo iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii xogta soo kabsaday dib ugu qalab MicroNet inta lagu guda jiro dib u soo kabashada.
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga saxnayn digsi
Top 5 Free iCloud shawladda kaabta
Sida loo soo ceshano Xiriirada tirtiraa Gmail / Muuqaalka / Android / iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Nexus 4
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka MMC (Warbaahinta Card)
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Nikon D800 Camera